Alpha နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်ရေး အကြောင်း
Alpha နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးသည် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် SONY Mobile ဖုန်းများ တရားဝင်ရောင်းချရေး ကုမ္မဏီတစ်ခု ဖြစ်သည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်နေသောနည်းပညာဖြစ်သည်။ ALPHA ကုမ္မဏီအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ သုံးစွဲသူလူတန်းစားအသီးသီးအတွက်လိုအပ်သော ဆက်သွယ်ရေး အသုံးအဆောင်ဖြစ်သည့် လက်ကိုင်ဖုန်းများအတွက် up-to-date ဖြစ်သော၊ အသုံးတည့်သော၊ အရည်အသွေးမြင့်သော လက်ကိုင်ဖုန်းများကို ထောက်ပံပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ALPHA TECHNOLOGY & COMMUNICATION PTE. LTD. is an Authorized Distributor of mobile phones for SONY MOBILE IN REPUBLIC OF THE UNION OF MYANMAR. The telecommunication industry is one of the fastest growing industries in Myanmar and ALPHA prides itself in providing the most up-to-date and affordable products with high quality to satisfy the communication needs of every single consumer in Myanmar.
With an established distribution network and professional experience in the Myanmar telecommunication industry since 2000 together with the support of SONY MOBILE, ALPHA is committed to bring maximum delight and satisfaction to everyone in Myanmar.
Alpha Technology & Communication Pte. Ltd. ©2012